RMA Mutemo - Staba Electric Co, Ltd.
Dzorera Merchandise Mvumo
Staba Magetsi Co., Ltd. (ipfupi seStaba) zvigadzirwa zvinosungirwa kuti zvive zvakasununguka mukuremara mune zvekushandisa nekugadzira pasi pekushandisa zvakajairika mukati menguva yewarandi. Zvibvumirano zvevimbiso zvezvigadzirwa zvakagadziriswa zvinotongwa nezvibvumirano zvakasiyana uye zvisina kuvharwa mugwaro iri.
Nguva yeWarranty: Kazhinji, Staba inopa 24 mwedzi garandi kubva pazuva rekutumirwa. Kana iyo garandi izwi muchibvumirano chakakodzera kana invoice zvakasiyana, kondirakiti kana invoice izwi rinokunda.
Staba Basa: Staba yega basa pasi pewarandi inogumira mukugadzirisa kweanokanganisa uchishandisa nyowani kana kugadziridzwa zvikamu, kana kutsiva izvo zvisina kukwana zvigadzirwa zvinodzoserwa nevatengi vatengi. Staba inochengetera kodzero yekushandisa yekutsiva zvinhu zvechitatu bato zvinongedzo kana zvikamu zvisisawanikwe kubva kune vekutanga vatengesi.
Kusarudzika kweWarranty: Staba haitore chikwereti semhedzisiro yezviitiko zvinotevera, pasi payo garandi inova isina maturo uye inomira kushanda. 1. Chigadzirwa chinowanikwa chakaremara mushure mekunge nguva yewarandi yapera. 2. Chigadzirwa chakashandiswa zvisirizvo, kushungurudzwa, kuregeredzwa, tsaona, kukanganisa, kugadzirisa, kana kugadzirisa zvisina mvumo, kungave netsaona kana zvimwe zvikonzero. Mamiriro akadaro anozotemerwa naStaba mune kwayo yega uye isina kugadzikana kungwara. 3. Chigadzirwa chakakuvadzwa nekuda kwenjodzi kana mamiriro akaipisisa, angave echisikigo kana evanhu, kusanganisira asi asingagumiri kumafashama, moto, mheni kurira, kana kukanganiswa kwetambo yemagetsi. 4. Iyo serial nhamba pane chigadzirwa yakabviswa, yakachinjwa, kana kusvibiswa. 5. Iyo waranti haizofukidze zvinokuvadza, kana kukuvara kwakaitika panguva yekutakura.
Yakawedzerwa Warranty: Staba inopa yakawedzerwa warandi iyo inogona kutengwa kubva kumutengesi wedu wekutengesa kana iwe ukaisa odha. Iko kubhadharisa kwekutenga warandi yakawedzerwa kuri kuwedzera, zvichibva pamutengo wekutengesa wechigadzirwa.
Kuti tibatsire mutengi kuti atangezve kuita zvakajairwa nekukurumidza nekukwanisa uye kudzivirira mari pazvigadzirwa zvisina kunyanya kukuvadzwa, isu tinoshuvira kukubatsira nekugadzirisa matambudziko ari kure uye kutsvaga nzira dzese dzinogoneka dzekugadzirisa chishandiso pasina nguva isingakoshi uye mari. yekudzorera chigadzirwa kuti chigadziriswe. Mutengi anoti chinetso, uye bata neStaba mutengesi anomiririra kana rutsigiro rwehunyanzvi nekupa yakadzama dambudziko tsananguro mumazwi, mifananidzo, uye / kana mavhidhiyo. Staba inoita nhamburiko dzakanakisa dzekunetsa kugadzirisa.
Staba inongogamuchira inodzoka kubva kune vatengi vakatenga. Kana iwe ukawana dambudziko nechedu chigadzirwa ndapota dzokera kwawakatenga.
RMA Nhamba: usati wadzorera zvakaremara zvigadzirwa, mutengi anofanira kutaura nemumiriri wedu wekutengesa weiyo RMA fomu ine mvumo RMA Nhamba, uye zadza uye utumire kumashure kune anomiririra mutengesi kana info@stabamotor.com. Ziva kuti iyo RMA nhamba inofanirwa kuratidzwa kunze kwemapakeji ese akadzorerwa. Staba inogona kuramba kugadziridza kana kutsiva chigadzirwa pasina RMA uye kudzosera chigadzirwa kuMutengi nekutakura zvinhu.
Kupera: RMA inoshanda kwemakumi matatu (30) mazuva ekarenda mushure mekuburitswa kwaStaba. Vatengi vanofanirwa kudzorera chigadzirwa chakatsanangurwa muRMA mukati memazuva makumi matatu (30) kana RMA nyowani ichazodiwa.
Pasuru Chinodiwa: Zvese zvigadzirwa zvinodzoserwa zvinofanirwa kunge zvakapakurwa nenzira kwayo kudzivirira kukuvara kwekutakura.
Kugadzwa kweWarranty Mamiriro: Kana chigadzirwa changogamuchirwa, Staba inosarudza iyo garandi mamiriro nekutarisa serial manhamba uye kuongorora zvinhu. Chinhu chewarandi chinofanira kugadziriswa kana kutsiva pasina kubata vatengi. Kana chinhu chisiri-chewarandi chinoda kugadziriswa mutengi anotumirwa Fungidziro yeMafomu fomu iyo yavanogona kuongorora nekusaina kana zvichigamuchirwa. Zvinhu zvisiri-zvewarandi hazvigadziriswe pasina mvumo yakanyorwa nemutengi. Kana chinhu chikaonekwa sechisingagadzirisike mutengi anofonerwa uye aine mukana we (1) kuita kuti chigadzirwa chidzorerwe kana (2) kuti chigadzirwa chibviswe.
Kugadzirisa Mari: Chinhu chewarandi chinofanira kugadzirisa mahara. Chinhu chisiri-chewarandi chinofanirwa kunge chiri chekutarisira zvinhu zvemari uye mari yekugadzirisa kana zvichibvira.
Mitero Yekutakura: kana iri mu-garandi, Mutengi achabhadhara inbound mitoro yechigadzirwa chakadzoserwa uye Staba ichabhadhara kutakura kwekubuda kwezvakagadziriswa kana kutsiva chigadzirwa kuMutengi; kana iri yekunze-kwe-garandi, mutengi anofanira kubhadhara zvese zviri mukati uye zvichibuda mutengo wekutakura.
Iyo yakagadzirirwa kana kutsiviwa Hardware ichave inofanirwa kune yakasara yeiyo yekutanga garandi nguva kana makumi mapfumbamwe (90) mazuva, chero iri yakareba. Bumbiro racho rinogona kunge richichinja pamaonero eStaba, chero nguva, pasina ziviso isati yaitika.
Motokari, Vacuum Cleaner, Brush isina mota, BLDC mota, Brushless DC mota, BLDC Fan mota, kubvunza pricelist